CONCOURS DICTÉE DE LA FRANCOPHONIE: Les lots des lauréats
TETIKASA « TSARAHONENANA »: Tsy andeha irery ny Croix Rouge Malagasy
SECOURS ISLAMIQUE FRANCE : Les travaux d’urgence pour l’EPP Ambodihady
CHAMPIONNAT DE LECTURE: 31 candidats en demi-finale
AIFM MADAGASIKARA: Sambany no nisy seho hafakely tamin’ny 8 martsa
Lynda ANDRIATSITONTA lisi-pifidianana	0 Commentaire jan 11, 2019
Ny 15 mey 2019 ny fikatonan’ny fanavaozana ny lisi-pifidianana. Efa nanomboka ny 1 desambra 2018 teo ny fisokafan’ny fanavaozana ny lisi-pifidianana ka mba tsy hisian’ny fifanomezan-tsiny indray hoe : tsy voasoratra ao anaty lisitra dia mila manatona biraom-pokontany ireo feno 18 taona no miakatra manome ny mombamomba azy.
ACTUALITE/ Aide humanitaire/ Education/ Politique/ SOCIAL
Lynda ANDRIATSITONTA vahao ny oloko	0 Commentaire jan 11, 2019
“Tsy ny fivavahana no mahatonga ny firenena mitotongana fa ny fahotan’olombelona”, hoy i pasitera Heritiana Randriarimalala, filoha mpanorina ny fiangonana Vahao ny oloko. Mampatsiahy ny rehetra izy fa ny zava-mahadomelina, ny fijangajangana, ny kolikoly… no mampitotongana ny firenena. Video
ACTUALITE/ ELECTION & PROPAGANDE/ Politique/ RESULTAT
Lynda ANDRIATSITONTA 0 Commentaire jan 9, 2019
Mazava ny resaka fa izay voalazan’ny CENI na ilay vaomiera mahaleotena mikarakara ny fifidianana, no nohamafisin’ny teo anivon’ny HCC omaly takariva…
Lynda ANDRIATSITONTA hatsi-bahoaka, HCC, nicolas randrianasolo	0 Commentaire jan 9, 2019
“Tokony arahina izay lazain’ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana”, hoy ny solombavambahoaka Nicolas Randrianasolo.
JENERALY BÉNI XAVIER RASOLOFONIRINA: Tsy handatsa-drà ny mpiray tanindrazana aminy
Lynda ANDRIATSITONTA jeneraly Béni Xavier Rasolofonirina, ministry ny fiarovam-pirenena	0 Commentaire jan 9, 2019
“Ny fanabeazana azoko, ny fiofanana azoko, ny fitaizana azoko dia maniraka ahy hanara-dalàna sy hanaja ny lalam-panorenana misy eto amintsika, didy aman-dalàna misy ”, hoy ny ministry ny fiarovam-pirenena, jeneraly Béni Xavier Rasolofonirina.
ABSENCE DU PREMIER MINISTRE A IAVOLOHA : Déjà prévue
Lynda ANDRIATSITONTA christian ntsay	0 Commentaire jan 8, 2019
Concernant l’absence du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, M. Christian Ntsay, lors de la cérémonie de présentation de vœux, au Palais d’Etat d’Iavoloha le 7 janvier 2018, il s’avère utile d’apporter les précisions suivantes, afin d’éclairer l’opinion. −Un appel téléphonique, reçu quelques minutes avant le début de la cérémonie, avait informé le Président de la(…)
ACTUALITE/ Developpement/ Economie/ Politique/ SOCIAL
CLUBS FONGOTRA: Manana fanantenana ny taranaka ho avy
Lynda ANDRIATSITONTA TI-IM, transparency international madagascar	0 Commentaire nov 24, 2018
Tanora Malagasy 500 isa nilatsaka an-tsitrapo hiady amin’ny kolikoly. Hanatevin-daharana ny Clubs Fongotra izy ireo.
ACTUALITE/ ELECTION & PROPAGANDE/ Politique
“ENQUÊTEURS” MANONTANY NY SAFIDINY NY MPIFIDY: Tsy nahazo alalana avy any amin’ny CENI
journal madagascar 0 Commentaire nov 7, 2018
Misy mpanao fanadihadiana manontany ny safidiny ny mpifidy mivoaka avy ao amin’ny birao fandatsaham-bato.
TANORA ACTIF AN’I MADAGASIKARA : Làlana mankany amin’ny fampandrosoana ny fifidianana
Lynda ANDRIATSITONTA 0 Commentaire nov 3, 2018
Andro vitsy sisa no isaina dia higadona ny fifidianana filohampirenena izay hisafidianan’ny vahoaka Malagasy ny Filohan’ny Repoblika hitondra ny firenena mandritra ny 5 taona manaraka indray.
Lynda ANDRIATSITONTA 0 Commentaire oct 9, 2018
Tsy azon’ny mpiasam-panjakana ambony atao ny manao fampielezan-kevitra na mijoro eo akaikin’ny kandida manao izany aza.
“CASTING BRAND AMBASSADOR”: Misokatra ho an’ireo liana momba filatroana
ACHAT DES PRODUITS DOVE, AXE: Le gros lot était « voyage pour deux Tana-Nosy Be- Tana »
VATOSOA 30 TAONINA TRATRA: Ho amidy hanamafisana ny ady amin’ny tsy fanarahan-dalàna
SECOURS ISLAMIQUE FRANCE: 2066 ménages du district de Morombe ont reçu des denrées alimentaires
FANONDRANANA ENTANA ANY AMERIKA: Ilaina ny fifehezana ny fenitra takiana
BEN’NY TANÀNA AMBOHITRIMANJAKA: Laharam-pamehana ny fanabeazana
ENGAGEMENT ORANGE SOLIDARITÉ: L’égalité de chance de progresser dans la vie
RELÈVEMENT DES SINISTRES DU MOROMBE: Les besoins restent criants selon l’ONG Secours Islamique France
RÉABONNEMENT STARTIMES: 10 écrans plats avec décodeur intégré offerts
ANTOKO POLITIKA GFFM : Ho an’ny fitondrana ny ampahafolon’ny harena
KANDIDA HO FILOHAM-PIRENENA: Foanana ny andrim-panjakana mandany vola
CENI : Hatramin’ny 31 janoary 2018 ny fanavaozana ny lisi-pifidianana
CENI : Il faut accroitre la confiance des acteurs politiques et les électeurs.
Sénatoriales : Fin de la campagne électorale dans le silence
Fifidianana Ben’ ny Tanana: Nalaina nifidy ny olona.
Harilala Ramanantsoa: Azo harenina tsara ny tanana an’Antananarivo.
Kandida laharana faha-03, Ampanotokana : Tonga maro ny mponina ao amin’ny fokontany 29.
Kandida TIM laharana faha-03: Nirodorodo ny vahoakan’ Ampitatafika
Kandida Ny Antsika: Misy manaparitaka afisy mitondra ny anarany amin’ny antoko TIM.
Rado Ramparaoelina : Hisy lalam-baovao hampitohy ny RN1
Lalatiana Rakotondrazafy: Roso ny dia, tsy mipody koa .
Kandida kaominina Fiombonana sy Ankadimanga: Tara ny famapandrosoana.
Tantine Louisette laharana faha-3 ao amin’ ny kaominina Ampanotokana : Fanabeazana no vaindohan-draharaha.
Dr Rado RAZAFINDRATSIMBA: Kandida Ben’ny Tanana Talatamaty laharana 01.
LALATIANA RAKOTONDRAZAFY : Niniana tamin’ny vahoaka fa tsy hanao kolikoly.
RADO RAMPARAOELINA : Mandeha isaky ny vohitra ny fampandrosoana.
Harilala Ramanantsoa: Miatraika mivantana amin’ny vahoaka ny fandaharan’asany.
RADO RAMPARAOELINA: Efa vonona ny mpamatsy vola.
KANDIDA BEN’ NY TANANA ANTANANARIVO : Harilala RAMANANTSOA mifototra amin’ ny fokonolona ny fandaharan’ asany.
Harilala Ramanantsoa: Nosafidiany manokana ny tanora hiara-hiasa aminy.
Tantine Louisette: fanatanterahana ny zon’olombelona no hamongorana ny fahantrana
Dans le cadre de la célébration de la
Namolavola tetikasa iray ny « Croix Rouge
Les élèves de l’école primaire publique